Mifananidzo yekicheni mumhando yakapfava Art sens - mazano eimba nebindu
Zvidziro zvemadziro Zvidziro zvemadziro
Mifananidzo yekicheni mutsvuku
Mapikicha emakicheni mune akapfava mavara
Mifananidzo yekona D-yakavezwa makicheni
Mifananidzo yekicheni-fuchsia-yemakicheni kicheni
Mifananidzo yekirasi yekicheni-chimiro kicheni
Mifananidzo yekicheni yepepuru
Mifananidzo yeimba yekutandarira yekicheni uye yekudyira - fenicha mazano
Mifananidzo yekamuri yekugara mune yebrown uye beige
Mifananidzo yekamuri yekutandarira mune chena
Mifananidzo yekamuri yekugara mune chena, beige uye brown
TV pamadziro mapikicha - mazano kuseri kwemadziro kumashure kweTV
Mifananidzo uye mazano ekutonga zvemukati
Mifananidzo yeimba yekutandarira yepepuru
Corridor uye horoway
Mifananidzo uye mazano eiyo corridgeor uye horoway
Mifananidzo uye mazano eimba-imwe-imba
Mifananidzo yedzimba dzemazuvano nedziva rekushambira
Kuronga uye kukanda nzvimbo kwebindu
Yakasarudzwa nePride Yangu Pride Photo Contest
Ivan Dimitrov ………. Mifananidzo yakasarudzwa yevatori vechikamu kubva kuMi
Anya Gyoreva ………. Mifananidzo yakasarudzwa yevatori vechikamu kubva kuMi
Steli Nikolova ………. Akasarudzwa Mutori Wemifananidzo kubva kuangu
Stefka Anestieva ………. Akasarudzwa Mutori Wemifananidzo kubva kuangu
Boryana Georgieva ………. Akasarudzwa Mutori Wemifananidzo kubva kuangu
Steisi An ………. Mifananidzo yakasarudzwa yevatori vechikamu kubva kuMi
Kalinka Stoilova ………. Mifananidzo yakasarudzwa yevatori vechikamu kubva kuMi
Desi Ivanova ………. Mifananidzo yakasarudzwa yevatori vechikamu kubva kuMi
Asia Doikova ………. Mifananidzo yakasarudzwa yevatori vechikamu kubva kuMi
Mapofu uye maketeni
Iwo mavara ari mukati
Mafashoni mune zvemukati
Nyora nzira yekubheka
Kuronga Kwekudya uye Kushongedza
Kukurumidza, nyore, kunonaka!
Spaghetti / Pasita
Zviite iwe pachako
Mapikicha emakicheni mune akaparara, pastel mavara
Heano mamwe emakicheni mazano mune yepingi yepink,
rakapfava kana cappuccino.
Kusanganiswa kwakashongedzwa kwemidziyo yemazuva ano uye toni dzakapfava izvo zvinowedzera nyaradzo kune dzazvino chikafu.
Kicheni mazano mune akaparara mavara:
Mapeji: 1 2 3
Art Sense ndeye yemagetsi zvemukati dhizaini dhizaini iyo icharatidza idzva uye nyowani yemukati uye yegadheni yekushongedza mazano. Pfungwa dzinonakidza dzekumba.
Isu tichakubatsira iwe nezano reunyanzvi uye mazano anoshanda.
Nakidzwa uye rega mweya wekugadzira uwedzere kukuremedza!
Satto Art Gallery
Nakidzwa yakasarudzika dhizaini uye yakakwirira, yakasarudzika coziness uye kudziya, kuwirirana pakati pemavara uye chimiro. Imba yega yega inogona kuve inonakidza uye inoratidzika nzvimbo, iyo inofadza uye inofungidzira vashanyi.
Satto Art Gallery iri paimba gallery inoratidza - yakacheneswa girazi и pendi yemafuta.
About Satto Art Gallery »
Art Studio Satto - girazi remunyori. Girazi rakapendwa.
Kana hunhu hwehunyanzvi uzivi hwekambani, saka hunyanzvi uye chiono ndiwo mazwi akakosha mune iyo nzira yebasa idzva. Kunyanya kukoshesa kwe Satto Art Studio ndeyekuchengetedza iko kuravira kwakanyanya kwekugadzira mifananidzo yakasarudzika uye mabasa asingakanganwike ehunyanzvi.
About Satto Art Studio »
Yakagadziriswa-girazi windows pamaukati.
Artistic zvemukati mhinduro.
Yakagadzika girazi imhando yegirazi rakamoneredzwa nenzira yegirazi rakapendwa uye riri rakasiyana basa rekunyora. Iyo inogadzirwa neruoko, negirazi rimwe nerimwe rakacheneswa rinofungidzirwa kuita kopi imwe. Iyo projekiti inotemwa zvinoenderana nezvinodiwa nemunhu uye zvakanyatsoenderana nezviri mukati.
© 2012-2020 Art sens - mazano eimba nebindu
Yakavanzika Policy Mitemo yekushandisa Contacts uye kushambadzira